[SAWIRO] – Maleeshiyaatka uu Soo Tababaray Turkiga ee Gorgor oo ku le’day dagaal ka dhacay duleedka Dhuusamareeb – Calamada.com
calamada January 26, 2022 1 min read
Ugu yaraan 7 askari oo ka tirsan maleeshiyaatka uu Turkigu soo tababaray ee loo yaqaano GORGOR ayaa lagu dilay, 12 kalena waa lagu dhaawacay dagaal xoogan oo shaley ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb.
Dagaalkan oo ka ka dhacay tuulada Sina-dhaqo oo qiyaastii 10km u jirta deegaanka Ceeldheere ee duleedka Dhuusamareeb ayaa yimid ka gadaal markii ciidanka DF ay isku dayeen inay dhaq-dhaqaaqyo ciidanka ka sameeyaan aagaasi.
Qaar ka mid ah askarta lagu dilay dagaalkaas ayaa maanta lagu soo bandhigay mid ka mid ah deegaanada ay maamusho Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud, waxaana fagaaraha lagu soo bandhigay meydadka askartaas warbaahinta kula hadlay waaliga Al-Shabaab ee Galgaduud Sheekh Abuu Khaalid.
Mas’uulkan ayaa sheegay inay dagaalkii shaley ka dhacay duleedka Dhuusamareeb lagu jebiyey ciidanka DF, ayna soo ganiimeysteen hub iyo saanad ciidan oo ay ka carareen askartaasi.
Hoos ka daawo sawirada askarta lagu dagaalkaasi.
Previous: Dhageyso; Shabaabul Mujaahidiin Oo Ka Tacziyeeyay Istish-haadka Mas’uul Sare.
Next: Qarax Iyo Dil Qorsheysan Oo Boosaaso Ka Dhacay.